နလံထစ မြန်မာပြည် ရှေ့သို့ချီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » နလံထစ မြန်မာပြည် ရှေ့သို့ချီ	4
နလံထစ မြန်မာပြည် ရှေ့သို့ချီ
Posted by zaw win on Jun 27, 2015 in Arts & Humanities, Literature/Books |4comments
ပြေလည်စ နလံထစ မြန်မာပြည်ရယ်
အရာရာမှာ ယိုင်နဲ့နဲ့ လျှောက်လှမ်းနေရတယ်
မြစပဲရိုး says: “နလံထစ မြန်မာပြည်ရယ်” လို့တောင် မထင်ပါ မင်းသုတ ရေ။
နလံထ ဆိုတာ ရောဂါစင်စပြုပီ မို့ အားမွေးဖို့ဘဲ အရေးကြီးတယ်။
အခု မြန်မာပြည် က အတွင်း လှိုက်စားဒါဏ်ရာကြီး က ပိုပိုပြီး ပွါးလာတာ ကို ဟန်လုပ်ဖုံး ထားတာ။
Alinsett @ Maung Thura says: နလန်ထူသလိုလို ဟန်ဆောင်ပြနေတဲ့ ဗမာပြည်…
.နေမကောင်းရင်လည်း မကောင်းဘူးလို့ အမှန်တရားကို ချမပြဘဲ….
ဟန်ဆောင် ဖုံးကွယ်မှုတွေနဲ့…. အသံကောင်း ဟစ်ပြနေတဲ့ ဗမာပြည်… ဒီမိုကရေစီတောင်… မြန်မာပြည်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒီမိုကရေစီပဲ ဖြစ်ရမယ် ဆိုပဲ
(ဦးခင်ညွှန့် အပါအဝင် ထိပ်သီး အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ လက်သုံးစကား)
အောင် မိုးသူ says: ဆုတောင်းနေပါတယ်
Mike says: .နလံကိုမထူနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာ